जितुदाईले कफीमा ब्ल्याक लेवल हाल्नु भएछ , रातैभरी झगडा पर्यो —केदार घिमिरे ( माग्ने बुढो ) - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
१ मंसिर २०७४, शुक्रबार १४:२७ 13
‘छक्का पञ्जा २’ले बिहिबार प्रदर्शनको ५१ दिन मनाएको छ । असोज ११ गते फूलपातीको अवसर पारेर प्रदर्शनमा आएको यो सिनेमाले कार्तिक ३० गते प्रदर्शनको ५१ दिन पार गरेको हो । सिनेमा प्रदर्शन भएको ५१ दिनको अवसरमा काठमाण्डौको सिटी सेन्टरमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । आजको गफगाफमा हामीले सिनेमाका निर्माता तथा कलाकार केदार घिमिरे संग सिनेमा निर्माणका बेलाका प्रसंगमा कुराकानी गरेका छौ ।
छक्का पन्जाले ५१ औँ दिन मनायो , फर्केर हेर्दा सिनेमा स्क्रिप्ट देखिको आउँने यादहरु के के छन ?
खास हाम्रो विकास आचार्य दाईले आफैले बनाउन लागेको सिनेमा निरन्जना थियो । खासमा यो निर र अन्जना भन्ने दुई जना पात्रको कथा थियो । त्यसपछि यो कथामा अलि सहयोग गरिदिनु न भनेर दीपक दाईलाई दिनु भएको रहेछ । दिपक दाईले थप्दै जाने क्रममा कमेडी थप्दैँ जानु भएछ । कमेडी थप्दै जादाँ यो छक्का पन्जा बनाऔँ न त भन्ने भएछ । अब टिममा प्रस्ताव आयो । लगभग छक्का पन्जा बनाउँने भईयो । त्यसमा अलिकति तोडमोड गरेर कमेडी थप्नुपर्यो र सम्वाद लेख्नुपर्यो भन्ने कुरा आयो । हामीले तत्काल सिनेमा नबनाउँने मनस्थितीमा बसेको थियौ । त्यसो भएको कारण ल यो स्क्रिप्टलाई नै फाईनल गरौँ न त भन्ने भयो ।
यही गर्दा सम्वाद लेख्न धुलिखेलमा म, दिपकदाई, जितु दाई र अभिमन्यू निरवी बस्ने भईयो । धुलिखेलमा बसेर कथा सुन्दा हाँस्ने ठाँउ त कही छैन । होटल पनि त्यस्तै थियो । बसको हर्न सुनिरह्ने । होटल एकदमै आवाज आईरहने । त्यहाँको वातावरणले गर्दा हामी सबै बीचमा रातैभरी झगडा पर्यो । त्यहाँ झगडा मात्र पर्यो र सुतियो । पछि त्यो होटल लोद्धर छ कि भन्ने लागेर बिहान उठ्ने बितिक्कै त्यहाँबाट हिडियो (लामो हासोँ) । त्यहाँबाट गोर्कण रिसोर्टमा गएर बस्यौ । बाकीँ सबै काम गोर्कण रिसोर्टमा गएर गर्दा यति सम्म भयो ।
सम्वाद लेख्दै जादाँ धेरै रमाईलो कुन सम्वाद लेख्दा भएको थियो?
रमाईलो धेरै नै हुन्छ । प्राय सम्वादहरु फुराउँदा हामी जति दर्शक हाँस्नुभएको छ त्यो भन्दा बढी त हामी नै हास्ँछौ । हरेक कुरा फुर्दा हास्ँछौ तर कुरा के भने कुनै बेला एक जनाले फुराएको कुरा अर्कोलाई हासोँ नउठ्ने पनि हुन्छ । तर, पछि त्यसमा पनि दर्शक हाँस्ने हुन्छ ।
कथा लेख्दै जादाँ दीपक दाईलाई दीपा दिदीको फोन प्रतिबन्ध, कफी खान, खुट्टा तन्काउन देखि सबै कुराको सेड्युल पनि थियो रे । त्यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ?
फोन उठाउन न पाउने नियम हुन्छ । बेला बेलामा चाहि एउटा मात्र है यो चाहि लास्ट है कामको आयो भनेर उठाउने (लामो हासोँ)। तपाईहरु चाहि उठाउने म नउठाउने भन्यो फेरी एकछिन पछि अर्कोले पनि उठाउने । त्यस्तो पनि हुन्छ । अनि स्क्रिप्ट लेखिसके पछि हाम्रो कफी खाने समय हुन्थ्यो । एक दिनभने जितु दाईले ब्यायाम गरिसकेपछि बेलुकाको अलिकति ब्लायक लेवल झुक्किएर कफीमा हाल्नु भएछ । खाँदा टर्रो टर्रो थियो लास्टमा के हो यो भन्दा त ब्ल्याक लेवल पो रैछ (लामो हासोँ)
स्क्रिप्टको सम्वादहरु कति दिन लगाएर लेख्नुभयो ?
स्क्रिप्ट हामीले पाँच दिनमा तयार पारेको हौ ।
सम्वाद लेखेको स्टाईल मै सिनेमा बनेको छ ?कति प्रतिशत चाहि बनेको छ ? कति प्रतिशत काटछाँट भयो?
यसमा धेरै काटछाँट भयो । फिल्म त उल्टो पाल्टो अगाडीको सिन पछाडी । कति ठाँउमा त कथा लेख्ने मान्छे समेत छक्क परेका थिए सिनेमा हेरेर । कथा त कता हो कता ? (हासोँ)
दीपकराज गिरीले फेसबुकमा स्विकार पनि गर्नुभएको छ । हामीले पहिला सोंचेको जस्तो बनाउन सकेनौँ भनेर । के पहिला सोंचेको जस्तो भन्दा कथा अर्को आएको हो र?
धेरै कुराहरु पछि रि–सुट भए । पट कथामा जे थियो त्यसलाई सच्याउँदै गईयो । डरले पनि हो के । छक्का पन्जा त्यस्तो राम्रो थियो । छक्का पन्जा २ मा यस्तो बिग्रिने हो कि ? भन्ने डरले गर्दा सच्याउँदा सच्याउदै सिनेमा नै अर्को बन्न गयो ।
छक्का पन्जा ३ चाहि कस्तो बन्ला ?
यसको अहिले सम्म कथा नै फाईनल भएको छैन । कथा नै हामी छान्ने तयारीमा छौ ।
अब छक्का पन्जा ३ को लागि कुन होटेलमा जानुहुन्छ स्क्रिप्ट लेख्न?
(लामो हासोँ) झगडा नहुने खालको होटल खोज्नुपर्छ एउटा मिलेको । वास्तुशास्त्र हेरेर (लामो हासोँ)
५१ औँ दिन मनाएको छ । दर्शकहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ त?
दर्शकहरुले जुनमाया देखाई दिनुभएको छ । हामीले सिनेमा बनाउँन धेरै जानेको पनि छैनौँ । यो बल्ल हाम्रो चौथो सिनेमा हो । यहाँ सम्म आउँदा जति माया दिनुभएको छ । यो हामीलाई धेरै नै दिनुभएको छ । तपाईहरुले दिनुभएको मायाको एक एक हिसाब राखेर हामी अझै मिहेनत गर्दै अगाडि बढिरह्ने छौ ।
सिन्धुली महोत्सवमा कलाकारको ओईरो